बाआमाको पी’डा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी : उसकै पी’रले छा’ती पो’लेको छ,कहाँ होलिन् ? – Hamro24News
बाआमाको पी’डा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी : उसकै पी’रले छा’ती पो’लेको छ,कहाँ होलिन् ?
July 10, 2021 adminLeaveaComment on बाआमाको पी’डा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी : उसकै पी’रले छा’ती पो’लेको छ,कहाँ होलिन् ?
गैंडाकोट नगरपालिका-४ की २१ वर्षीया बिना सापकोटा असार १४ गतेदेखि बेप’त्ता छिन्। छोरी हराएको पी’रमा ४८ वर्षीया रीता सापकोटाले झपर्दी टोलस्थित घरमा ११ दिनदेखि आफूलाई स’म्हा’ल्नै सकेकी छैनन्। का’खमा सिरानी च्या’पेर रुँ’दै बस्छिन्। बेला–बेला बर’ब’राउँछिन्। घरमा आउने आगन्तुकलाई उनी छोरी छिटो खोजीदिन अनुरोध गर्छिन्। ‘बाआमाको पी’डा बुझ्ने भगवान्जस्ती थिई छोरी। उसकै पी’रले छा’ती पो’ले’को छ।
कहाँ होलिन् ? कस्तो अवस्थामा होलिन् ?’, रीताले रुँ’दै भनिन्, ‘छोरीको पीरले सिरानी च्या’पेर बस्नी दिन आयो। जे भए पनि मेरी छोरी छिटो खोजी दिनुपर्‍यो।’ रीतालाई स’म्हा’ल्न गाह्रो भएपछि भित्तामा झु ‘न्डा’इ’एका फोटा सबै झि’कि’एका छन्। नत्र छोरीको फोटो देख्यो कि उनी रो’इहाल्थिन्। छोरीलाई कसैले ब’न्ध’क बनाएको आ’शं’का छ उनको। फर्कन्छे भन्ने लागेको छ। ‘छोरीको खुसीको कुरामा कहिल्यै रोकेनौँ। बाआमाको पी’डा व्यवहार बुझ्ने ‘छोरी हो’, उनले भनिन्, ‘जुन छोराछोरीको भरमा परियो आज उसको पी’डामा रुनुपरेको छ।
’ छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने आशामा चिना हेराउन पनि धेरै ठाउँ च’हारे। नवलपुरबाट काठमाडौं, भक्तपुरका थाहा पाएसम्म सबैकोमा पुगिसके। गैंडाकोटमा हेराउने भन्नेकहाँ पुगिन्। हेराउनेले सोमबारसम्म घर फर्किने बताएपछि उनी त्यसको भरमा परेकी थिइन्। तर, सोमबारसम्म केही पत्ता नलागेपछि उनी झन् चि’न्ति’त बनेकी छन्। ५० वर्षीय जायश्वर सापकोटालाई श्रीमती स’म्हा’ल्न निकै गा’ह्रो परिरहेको छ। छोरी खोज्न बिहानै निस्केर साँझ फर्किंदा जायश्वर जवाफविहीन हुन्छन्। छोरीको अवस्था के होला भन्दै खोज्न निस्कन्छन्।
निरा’श हुँदै फर्किन्छन्। ‘उसको पी’डा हेर्दैमा ठिक्क छ। आफैं स’म्हा’ल्न गा’ह्रो भएको बेला उसलाई स’म्हा’ल्न निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘अवस्था यो हो भन्ने मात्रै थाहा पाए पनि यो अ’न्धका’र हुन्थेन। पी’डा त कम हुँदै जान्थ्यो।’ बिनाको प्रेम सम्बन्ध भरतपुर महानगरपालिका लं’कुका प्रवेश कँडेलसँग रहेको जनाइएको छ। उक्त सम्बन्धबारे दुवै परिवार जानकार थिए। प्रवेशका दाइको विवाह यही वर्ष भएका कारण दुई वर्षपछि उनीहरूको विवाह गर्ने कुरा भएको थियो। प्रवेश अध्ययनका लागि बेलायतमा रहँदै आएका थिए। वैशाख दोस्रो साता नेपाल आएका उनी जुलाई १२ मा फर्किने हुन्। प्रवेश बिनालाई भेट्न गैंडाकोट पुगे।
त्यही बेला प्रवेशको अर्कै युवतीसँग प्रेम रहेको आ’शं’का भयो। बिनाले दुवैलाई राखेर कुरा गरी आधा घण्टामा फर्किने भनेर गएको बुवा जायश्वरले बताए। अर्की युवतीले गैंडाकोट आउन अ’स्वी’कार गरेपछि परिवारलाई भनेर प्रवेश र बिना भरतपुरको गौरीगन्ज गएका थिए। दुई जनाबीचको प्रेममा अर्की युवतीको प्रसंग जोडिएपछि बिनाले सोधपुछ गर्न खोजेकी थिइन्। तीन जनासँगै बसेर कुरा गर्ने भनेर निस्किएकी थिइन्। प्रवेशको स्कुटर चढेर भरतपुर गएको जायश्वरले बताए। उनका अनुसार अर्की युवतीको घरनजिकको चौरमा बसेर गफ गरेका थिए। त्यसै क्रममा बा’झा’बा’झ हुँदा बिना बे’हो स भएकी थिइन्।
बिनालाई घर लगेर धु’प’ब’त्ती बालेर ठीक हुने भन्दै धुप किन्न पसल गएको खु’लेको छ। त्यति बेलै बिनाको हो”स आएपछि प्रवेशले उनको अवस्थाबारे जायश्वरलाई जानकारी गराएका थिए। सवारी साधन खोजेर घर ल्याइदिन उनले प्रवेशलाई आग्रह गरेका थिए। बिना प्रवेशसँग रि’सा’ए’र हिँडेकी थिइन्। त्यही क्रममा प्रवेशले …प दार्थ सेवन गरेको स्थानीयसँगको सोधपुछमा खुलेको जायश्वरको भनाइ छ। प्रवेशले स्कुटर मागेर पुर्‍याउन खोज्दा बिना चढ्न मानिनन्। आफू चौबीसकोठीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटीएममा पैसा निकाल्न जाँदा बिना बेप’त्ता भएको बिनाको परिवारलाई प्रवेशले बताएका छन्। तर, बैंकको सीसीटिभीमा एटीएमको कार्ड हाले पनि पैसा झिकेको नदेखिएको जायश्वरले बताए।
बिनाको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा छोरी खोजी पाऊँ भनी निवेदन दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाले घ’ट’नाको अ’नु’स’न्धा’न भइरहे पनि नयाँ कुरा फेला नपरेको बताए। ‘अ’नु’स’न्धा’नको क्रममै छ। बिनाका बुवा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग समन्वय गर्ने खोज्ने काम भइरहेको छ’, डीएसपी थापाले भने, ‘थप नयाँ कुरा खुलेको छैन। हामी बुझ्ने क्रममै छौं।’ प्रहरीले बिनाका प्रेमी भनिएका प्रवेशलाई अ’नुस’न्धा’नका लागि नि’य’न्त्र’णमा लिएको छ। उनको साथबाट ब’रा’म’द गरिएको बिनाको मोबाइलको स्क्रि’न फु’टेको छ। बिनाको परिवारका सदस्य प्रवेशसँगै अर्की युवतीलाई पनि नि’य’न्त्र”णमा लिएर अ’नु’स’न्धा’न गरे प’त्ता लाग्ने बताउँछन्।
गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन्। सापकोटा परिवार ११ वर्षअघि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका ठूलीबेंसीबाट गैंडाकोट बसाइ सरेको हो। केही वर्षअघिसम्म साइकल मर्मत पसल राखेका थिए। कोरोना म’हा’मा’री चलेपछि गत वर्षदेखि खाजा पसल गरेका थिए। दुई छोरीमध्ये बिना कान्छी हुन्। बिनाका ११ वर्षका एक भाइ छन्। ठूली छोरीको विवाह भइकेको छ। – अन्नपूणर् पोष्टका लागि अनिल ढकालले यो समाचार लेख्नुभएको छ ।
साउन १ गतेबाट नेपालमा पनि टिकटक बन्द हुने !
आज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन, ७५ औँ वर्षमा प्रवेश
महिनावारी भएकाे बेलामा पेट दुख्ने समस्या भएका महिलाहरुका लागि प्याजले गर्छ औषधीकाे काम?